Tolow (Yibir-Saalax) 4.5 Yuu Ka Yahay? – Codka Qaranka Tanadland
Tolow (Yibir-Saalax) 4.5 Yuu Ka Yahay?
Dhaqanka soojireenka ah ee sinjiga iyo raad-raaca asalku waa daruuri. Wayadii hore Daarood ku isirka soomaalida waxay ku soo koobijireen labo oday oo ah (Dir iyo Daarood). Halka waayadaan danbe dadku ay ka yiraahdaan (Soomaali), dadkii hore waxay oranjireen (Dir iyo Daarood). Balse xaqiiqdu waxa weeye Soomaaliyi (Dir iyo Daarood) ka’ay badan. Reerka yibraha la yiraahdo waa labo qoys oo ka soo farcamay labo nin oo walaalo ah, waxaana la kala yiraahdaa (Meheri Saalax) iyo (Yaxye Saalax). Labada qolo qolada (Yaxye Saalax) waa beel la degta beesha Abgaal oo degaamo dhawr ah degta. Magaalada Xamarna Xaafadda Hawlwadaag ayey aad ugu badanyihiin. Laakiin (Meheri Saalax) waa dhawr qoys oo magaalada Garoowe degan.
Beesha (Meheri Saalax) reer miyi malaha waana dhawr qoys oo magaalada Garoowe degan oo keliya. Meel kale oo geyiga Soomaaliyeed ay ka degaana ma’ay jirto. Magaalada gaalkacyo marka ay soo galaan dadka yibraha ah ee (Meheri Saalax) la yiraahdo. Waxay soo martiyaan oo ay u yimaadaan dadka reer Tanadland. Yibraha (Meheri Saalax) la yiraahdo waxay magaalada Gaalkacyo ay ku leeyihiin hal maqaayad. Maqaayaddaasina waxay ku taalaa xaafadda Garsoor.
Iyadoo ay saas tahay ayaa waxaa jirta in afartii sanaddood ee ugu danbeeyey magaalada Gaalkacyo lagu diley 5 nin oo yibraha (Meheri Saalax) ah. Maqaal kaanina waxa uu ku saabsanyahay sababta keentay yibraha (Meheri Saalax) marka ay magaalada Gaalkacyo yimaadaan in lagu laayo.
Sidaynu ogsoonahay beesha (Yaxye Saalax) oo la degta beelaha Hawiye, beesha (Yaxye Saalax) iyo Hawiye iskama ay guursadaan. Laakiin yibraha (Meheri Saalax) iyo Habar-majeerteen waa’ay kala guursadaan. Habar-majeerteen oo ah reer nasabnimada waa hore ka baxay oo gun ah, si ay u xalaalaystaan ka guursiga yibraha (Meheri Saalax). Caqli xumadooda waxay yiraadeen waa dad jeberti ah oo waxay la dhasheen Daarood ka. Marka yibraha (Meheri Saalax) waa yibro u arka inay beesha Habar-majeerteen ay xoraysay oo iyaga ka tirsan. Marka 5-ta nin ee yibraha ah oo magaalada Gaalkacyo lagu diley waxay u adeegayeen gunta Habar-majeerteen. Niman kaas yibraha ah oo gunta Habar-majeerteen u adeegayeyna waxaa laayey beesha (Muumin Aadan).
Yibraha lagu laayey magaalada Gaalkacyo waxaa ugu danbeeyey nin adeer u ah yibirka wax ku qora websaydka (http://www.puntlandobserver.com/).
Ninka yibirka ah ee xaafadda Garsoor lagu diley taariikhdu markii ay ahayd (19/07/2017) ayaa wuxuu sababsaday aflagaadada uu caadeystey wiilka uu adeerka u yahay, ee wax ku qora websaydka (http://www.puntlandobserver.com/). Anigu runtii ma’an aqaan ninka websaydka http://www.puntlandobserver.com/. iska leh. Balse dad aan ku kalsoonahay oo war kooda baraha bulshada ku faa’fiyey ayaa iiga waramay (18/07/2017). Ninka iska leh websaydka (http://www.puntlandobserver.com/) waa nin yibir ah oo nagu dhexjira. Sida rag ka tirsan guutada (Qoorgooye) ay sheegeena wuxuu ka shaqeeyaa maqaayadda yibraha ee xaafadda Garsoor ku taala.
Maalintii ay taariikhdu ahayd (18/07/20017) markii aan ka war helay yibirka xunkaa ee reerka uu maganta u yahay meeshii uu ka amaanilahaa, aflagaadada joogtada ah ugu abaalgudey. Maqaal aan qoray maalintii xigtey oo ay taariikhdu ahayd (19/07/2017) ayaan meel yar waxaan ka soo geliyey tuduc, nuxurkeedu uu ahaa qof yibir (Meheri Saalax) ah hadii la arko dhafoorka ha laga toogto. Markaan qoray maqaal kaasna mudo hal saac ka yar ayaa magaalada Gaalkayo waxaa lagu diley ninka iska leh websaydka (http://www.puntlandobserver.com/) nin adeerkiis ah. Guji Halakan
” Metalan reerka (Reer Saalax) la yiraahdo oo magaalada Garoowe dhawrka qoys ay ka degaan, beesha Habar-majeerteen-na gabdhaha uga guursada Daarood baanu la dhalanay oo jeberti baanu nahay. Anaga (Reer Saalax) gabdhahayaga ma’ay geeyaan nagamana ay guursadaan maadaama ay yihiin dad yibro ah oo isqarinahaya. Marka maadaama yibraha (Reer Saalax) iyo Habar-majeerteen ay kala guursadaan anagu (Reer Saalax) waxaanu u aragnaa yibro Habar-majeerteen ay leeyihiin. Marka aanu Habar-majeerteen laynaynana dabcan yibir (Reer Saalax) ah meeshaanu ku aragno waanu ku shabaaxaynaa oo waxaanu u dilaynaa, yibirku waa yibir cadowgiina u adeegahaya. Marka Habar-majeerteen haday yibrahooda ay wax la rabaan waa’inay qaybtooda ay saamiga u helaan ay wax ka siiyaan. Laakiin marnaba anagu aqbalimayno in la yiraahdo dhawr qoys oo Habar-majeerteen ku tirsan si gooniya wax ha loo siiyo. Iyada oo ay u jeedadu tahay in qayb sadbursi ah oo siyaado ah la helo. ”
Wax qarsoon maaha, wax aanu marna qarinaynana maaha inaanu dhegta dhiiga u daro gunta Habar-majeerteen iyo cayayaanka ay ku adeegtaan. Yibraha (Meheri Saalax) na waa cayayaanka cayayaanka ugu liita
oo dabkudhaca ah. Waxay rabaan caqlixumadooda inay cadowga Tanadland ay u adeegaan dadka iyo degaanka reer Tanadland na ay ku dhex noolaadaan.
Yibraha (Meheri Saalax) Iyo Aqoonta Aan U Leeyahay :-
Ogsoonaada, yibraha (Meheri Saalax) maaha binu’aadan, mana aha dad nasab ah. Bal u fiirsada yibirka xunkaa ee ku falaada websaydka (http://www.puntlandobserver.com/). Mar kasta wuxuu aflagaadeynayaa Hawiye iyo Isaaq oo wuxuu iska dhigayaa nin dhalad ah oo Daarood ah. Marna Habar-majeerteen buu iska dhigayaa oo wuxuu aflagaadeynayaa dadka reer Tanadland oo uu maganta u yahay. Dabeecaas gunimada ahna maaha wax ku kooban wiilka washeysiga ah oo haya maqaayadda yibraha, ee waa dhaqan-gumeednimo yibraha (Meheri Saalax) oo dhami ay ka siman yihiih.
Intaas kadib waxaan halkaan u marinayaa fariin muhiim ah yibirka xunkaah ee Daaroodka iska dhigahaya, oo u haysta shaashadda gadaasheeda wixii qasiyad ah oo lagu sameeyo inaan laysu raacanayn. Ogsoonow, waxaad tahay nin dil suge ah oo ku xukuman toogasho. Ma wiil-hoog laandheere ah baad ismoodey sidayda oo kale?.
Anagu inaanu cidaan doono aflagaadeyno, cidaan doonana aanu kibir ku toogano hawlahaasi anagay gaar noo yihiin oo nalagu yaqaan. Cid inay juuq ka tiraado ku dhacda iyo cid aniga daalac ii raacan kartaana ma’ay jiri karto. Laakiin adigu adoo yibir xun ah oo looma’ooyaan ah ayaad waxaad u doobinaysaa sidii wiil-hoog laandheere ah.
Waxaad kaloo ogsoonaataa in adiga iyo yibraha kale ee kula joogaba aanu si xun nafta idiinkaga goyn doono, marka aanu maqaayadda idinku qab-qabano. Waxaan kaloo kuu sheegahayaa in maqaayadda xuntaa ee yibraha inaanu idiinkugu imaan-doono mar aan fogeyn. Laydinkana jaaseyn doono gefka iyo aflagaadada aydnaan ka fiirsan, ee aad aflagaadeyseen “Umadda Karaamaysan Ee Qaranka Tanadland”.
Wiilka Yibirka Ah Ee Shaqada Ka Dhigtay Inuu Maalin Kasta Inta Uu Agfariisto Kumpiyuutarka Yaala Maqaayadda Yibraha, Inuu Aflagaadeeyo Umad Qaran Ah Oo Karaamaysan. Bal Idinkuba Ka War dhawra Waxa Uu Ka Macaasho Cayda Iyo Aflagaadada Maalaayacniga Ah Ee Uu Caadeystey” Yibir Kaasi. Oo Halkaan Hoose Ka Daalacda Yibirkaas Xun Ee Fadarada Ahi Waxa Uu Ku Caytamahayo.
Halkani Waa Codka Wadaniga Xalaasha Ah Ee Umadda Karaamaysan Ee Qaranka Tanadland, By: Saxardid Xareed Bulxan.